Ka ‘lé problèm anie… – Malag@sy Miray
Ny fiaraha-monina eto andrenivohitra ankehitriny dia miaina ao anaty fahasarotana tanteraka. Loto, vaky trano, fahaverezana asa, sakatsakana ara-panjakàna, sns. Dia lasa heno amin’ny voambolan’ny olona tao anatin’ny taona vitsivitsy izay ny hoe « Ny problème ». Izay lazaina rehetra dia misy « problème », izay avoakan’ny vava dia ialohavan’ny teny hoe « ny olana anie » sns.
Mikarakara taratasy eny amin’ny biraom-panjakàna ianao diatsy hita ny varavarana tokony hidirana hikarakarana izay taratasy ilaina, hita indray izany avy eo dia mila mifindra birao hafa fa mbola misy taratasy hafa ilaina mialohan’ny ahafahana mangataka io taratasy ilaina io, vita daholo izany rehetra izany dia mila miandry elaela fa tsy ao ny mpanao sonia : problème!
Misy asa tokony karakaraina miaraka amin’ny olona dia mandiso fotoana ilay olona ka mila andrasana. Antsoina izy telopolo minitra aorian’ny fotoana nifanaovana dia milaza fa efa miala any an-tranony ho avy hamonjy ilay fotoana. Tonga izy afaka antsasak’adiny tsy ampy indray ny « dossier » ilaina fa adinony any am-piasana : problème!
Misakana fiara karetsaka ianao dia miady varotra dia miditra. Somary rovitra ny sezan’ilay fiara fa tsy atao manahirana izany fa ny maika dia ny tonga any amin’izay tanjona noeritreretina. Mitambokombokona ny fiara dia mijanona tsy mihetsika, lany ny solika, namoaka tavoahangy iray litatra sy sasany ny mpamily, ny tombin-dasantsy somary lavidavitra : probleme!
problème, problème, problème! izany no iainana isan’andro ary efa tsy dia mahataitra ny maro izany hany ka na ny voambolana « problème » aza dia toa nohamaivamaivanina ny heviny ao anaty fehezan-teny. Toa tsy dia tena milaza olana ilay teny fa kosa toa milaza sakana tsotsotra maivamaivana kanefa dia tsy noeritreretina loatra ny vahaolana tokony mifanitsy amin’izany.
Ndao havadika ny rasa, amin’izay olana iray dia farafaharatsiny tokony manao soso-kevitra vahaolana roa na telo isafidianana amin’izay tsara izay voakasika. Dia isaky ny handray fitenenana dia atomboy amin’ny hoe « ny mahamety an’io » na ihany koa hoe « ny tena tsara » dia ariana any alavitra any amin’ny tany efitra any ny teny hoe « problème » dia hanao dingana iray isika malagasy indrindra fa ny eto Antananarivo.